Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny solubilizing phosphate sy ny phosfat fanentanana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny solubilizing phosphate sy ny phosfat fanentanana | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / microbiology / Inona no maha samy hafa ny solubilizing phosphate sy ny fanentanana phosphate
Ny fototra maha samy hafa ny phosphate solubilizing sy ny fanentanana ny phosphate dia zavamiaina bitika dia bitika phosphate solubilizing hydrolyze voarindra sy inorganic Mora mampivaingana phosphore Kamban-teny ho mety levona phosphore phosphate fanentanana zavamiaina bitika dia bitika raha fanentanana Mora mampivaingana sy raikitra endriky ny phosphore ao an-tany amin'ny alalan'ny solubilization sy mineralization.
Ny phosore dia iray amin'ireo otrikaina ilaina amin'ny zavamaniry. Izy io dia faharoa amin'ny azota ary heverina ho iray amin'ireo macronutrients farany voafetra amin'ny fitomboana. Ny tany dia manankarena amin'ny phosphate tsy mety ritra. Saingy tsy ampy fôpôdôta mety levona izy io, izay azon'ireo zavamaniry afoka. Ny zavamaniry dia mifoka fosfor amin'ny endrika orthophosphate. Ny tsy fahampian'ny fosforôra dia mametra mafy ny fitomboan'ny zavamaniry, ny fivelarana ary ny vokatra. Raha te handresy ny tsy fahampian'ny P amin'ny tany fambolena dia asiana zezika phosoreo. Raha ny marina, ny phosoreo no otrikaina faharoa ampiharina indrindra amin'ny fambolena. Ny zavamiaina bitika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fihinanam-bilona P sy ny fosforoka zava-maniry. Ny zavamiaina bitika sasany dia mandray anjara amin'ny solubilization phosphate mineraly ary manamora ny fanentanana ny phosfat amin'ny tany.
2. Inona no atao hoe Solubilizing Phosphate
3. Inona ny atao hoe Phosfat Mobilizing
4. Fitoviana - Solubilizing phosphate sy Phosfat fanentanana
5. Solosaina phosphate vs Phosphate fanentanana amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Fosfat Solubilizing vs Phosphate Mobilizing
Inona no atao hoe Solosily phosphate?
Ny zavamiaina bitika phosphate dia microbes izay manana fitrandrahana mineraly sy solubilization mety ho fôforôra biolojika sy tsy organika. Ny hetsika solubilizing phosphore dia voafaritry ny fahafahan'ny mikraoba mamoaka metabolita toy ny asidra organika , izay anaovan'ny vondrona hydroxyl sy carboxyl azy ireo ny cation mifatotra amin'ny phosphate, ary ity farany dia navadika ho endrika mety levona.
Ny solubilization phosphate dia mitranga amin'ny alàlan'ny fizotran'ny mikraoba / mekanika isan-karazany, ao anatin'izany ny famokarana asidra voajanahary sy ny fitrohana proton. Misy karazany maro ny mekanika solubilization P microbial dia misy eo amin'ny natiora, ary ny ankamaroan'ny bisikileta eran-tany dia tsy azo afangaro amin'ny fotôlôjia tsy voajanahary dia omena bakteria sy holatra. Ny solubilization phosforus dia entin'ny bakteria saprophytic sy holatra maro be miasa amin'ny fôpôlyatôly mora levona. Anisan'ireo mikroboka isan-karazany, karazana bakteria avy amin'ny genera Bacillus, Pseudomonas, ary Rhizobium , karazana holatra avy amin'ny genera Penicillium sy Aspergillus , actinomycetes, ary mycorrhizae arbuscular no mikraoba mamoaka fosfat malaza monina amin'ny tany.
Sary 01: Clear Halo Production avy amin'i PSM
Ny zavamiaina bitika phosphate dia mitoka-monina ary miavaka amin'ny mpanelanelana antsoina hoe medium an'ny Pikovaskaya (PVK). Ity fitaovana ity dia misy fosfat tricalcium phosphate (TCP) / hydroxyapatite tsy mety ritra toy ny loharano P tokana. Ny zavamiaina bitika phosphate dia mamokatra halo mazava manodidina ny zanatany. Ny fahaizan'ny mikraoba phubate solubilising hamaha ny phosfat tsy mety simba amin'ny tany dia toetra tsara amin'ny fampandrosoana biofertilizers ho fampiroboroboana ny fambolena. Noho izany dia ampiharina betsaka ho biofertilizers amin'ny fomba fambolena izy ireo satria mitana andraikitra lehibe amin'ny famongorana ny tsy fahampian'ny phosphorous ny tany amin'ny fomba tsara kokoa amin'ny tontolo iainana, mahomby ary maharitra noho ny zezika simika.
Inona ny atao hoe Phosphate Mobilizing?
Ny zavamiaina bitika phosphate dia mikraoba mandray anjara amin'ny fanentanana ny phosforus amin'ny tany. Ny ankamaroan'ny mikraoba phosfate fanentanana dia zavamiaina bitika phosphate. Navoakan'izy ireo ny phosforus avy amin'ny endrika phosororo tsy mety ritra sy raikitra ao anaty tany. Vokatr'izany dia mitombo ny fahafahan'ny tany P ary ny zavamaniry dia afaka mandray fosfor amin'ny fomba maharitra.
Sary 02: Kitapo phosforus
Ny phosphate mobilizing microbes dia manetsika ny phosforus amin'ny fanovana ny pH ary koa amin'ny famokarana akora chelating. Ireo teny hoe philate solubilizing sy phosphate mobilizing dia ampiasaina hifanakalozana hanondro ireo zavamiaina bitika phosphate. Ny mikraoba phosfat fanentanana dia tafiditra ao anatin'ny fizotry ny fanovana ny tany P.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny phubate solubilizing sy phosphate mobilizing?
Ny fampiasana solubilizing phosphate sy phosphate mobilizing microorganism dia fomba iray manatsara ny fanatsarana ny fahombiazan'ny zezika P amin'ny fambolena.
Ny ankabeazan'ny mikraoba phosfate fanentanana dia mikraoba mamoaka fosfat.
Ireo karazana mikraoba roa dia miasa amin'ny tany ary mampitombo ny fahafahan'ny P amin'ny tany.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny philate solubilizing sy ny phosphate mobilizing?
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanalefahana ny phosfat sy ny fanentanana ny phosfat dia ny zavamiaina bitika fôfôphôma mandehidrehitra ny fôpôliôma tsy azo afangaro amin'ny fôkôphôlôma mety hamoaka fosforôma raha toa kosa ny fôsidà manetsiketsika ny zavamiaina bitika ao anaty tany amin'ny alàlan'ny solubilization sy mineralisation.
Ity tabilao manaraka ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny solubilizing phosphate sy ny fanentanana phosphate.
Famintinana - Ny phubate solubilizing vs Phosphate Mobilizing
Ny phosphore dia iray amin'ireo macronutrients lehibe takin'ny zavamaniry. Ny mikraoba dia ampahany lehibe amin'ny tsingerina phosforus. Ny ankabeazan'ny phosforus amin'ny tany dia misy amin'ny fôsfat tsy mety ritra. Ny mikraoba phosphate manentana dia manampy amin'ny fanentanana ireo endrika phosore tsy mety ritra sy raikitra ao anaty tany. Ny phosphate solubilizing microbes solubilise insoluble inorganic phosphates into soluble P. Ireo phosphate solubilizing sy mobilizing microbes dia zava-dehibe amin'ny biofertilizers amin'ny fambolena satria mampitombo ny tany P mety ho an'ny zavamaniry. Noho izany, ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny solubilising phosphate sy ny fanentanana phosphate.
1. Kamh, Mahmoud, et al. " Fanetsehana ny tany sy ny zezika phosphate amin'ny tanimbary ." Plant and Soil, Kluwer Academic Publishers.
2. Kalayu, Girmay. "Mikraosialy malubalika phosphate: fampanantenan-tena ho biofertilizers ." Gazety iraisam-pirenena momba ny fambolena, Hindawi, 9 Jona 2019.
1. “ Plate an'i Pikovskaya mampiseho microorganims azo avy amin'ny solosaina fosfat” Nosoratan'i Asawari - Asa manokana (CC BY 4.0) via Commons Wikimedia
2. " Kopia Phosforus Cycle " Nosoratan'i Welcome1To1The1Jungle ao amin'ny Wikipedia anglisy (CC BY 3.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina mitambatra sy mitohy Fahasamihafana eo amin'ny NAG sy ny NAM Fahasamihafana eo amin'ny Beta Lactam sy ny Non Beta Lactam Fahasamihafana eo amin'ny Oomycetes sy Zygomycetes Fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina sy ny haino aman-jery amin'ny microbiology
Fahasamihafana eo amin'ny SLR sy DSLR
Fahasamihafana eo amin'ny Magnetite sy Hematite
Fahasamihafana eo amin'ny Sulfur sy ny peroxide
Fahasamihafana eo amin'ny fihetsem-po sy ny fihetsem-po
Fahasamihafana eo amin'i Lava sy i Magma